Lapho kuqala inkathi efudumele emgwaqeni iqala ukwenza kusebenze zonke izinhlobo esithwalwa. Izinambuzane ezisikhungethe, ngokoqobo, yonke indawo. izivakashi bengamenyiwe ungasishiyi wedwa ngisho nalapho singaphansi emakubo, lapho zingena ngokusebenzisa amafasitela nezicabha bengena. Yiqiniso, kuze kube manje, yasungulwa nemithi yokuxosha ezahlukene eziningi, futhi ezinye izindlela zokuvikeleka, kodwa ngokuvamile kukhona wehluleka ukubhekana imisebenzi yabo abayabelwe. Ezimweni ezinjalo, ukuvikela umuzi wakho izinambuzane kuyoba ukufaka amanetha omiyane kuphela. Kanjani wena ufundani kulokho kulesi sihloko.
Kuze emashumini ambalwa eminyaka edlule, isivikelo omiyane on window walengisa gauze ezimibalabala noma anezikhala plastic. Kodwa namuhla ukudayisa imikhiqizo wesimanje ngaphandle kwamaphutha.
Ezimweni eziningi, amanetha omiyane ngesikhathi amawindi zakhiwe fajberglass, okuyinto fibre ingilazi kabani Kwamanzi camera nge plastic. Imikhiqizo ezenziwe kulokhu kwaziswa zinezikhathi amandla okusezingeni eliphezulu futhi ihlala isikhathi eside. Abanalo iphunga, kukuvumela kahle emoyeni futhi musa zabaseGibithe ziphela amandla kwelanga. Polutoramillimetrovye amaseli ukuvimbela Ukungena uthuli omiyane.
Textile amanetha web omiyane is yayithathe ngu iphrofayela Uhlaka aluminium, ebusweni okuyinto anodized noma camera nge ethile polymer kwengoma.
Kukhona izinhlobonhlobo kwemikhiqizo
into enjalo aphansi njengoba amanetha omiyane, senziwa ezinguqulweni eziningana, ngoba ongenza imisebenzi ehlukahlukene. Unalokhu engqondweni, zingase zihlukaniswe zibe:
"Antikoshki" kokuba PVC-enamathela. Le mikhiqizo uqine ngokwanele ukumelana naleli gagasi we izimpiko ikati kanye ngoqhwaku wezinyoni.
Anti-uthuli-grid nge amaseli encane kakhulu, lapho indlu akusho zingene impova kanye imbewu. Basuke Kunconywa kubantu abaphethwe komzimba ngezikhathi ezithile zonyaka.
onobuhle Standard, ivikela endlini kusukela esithwalwa kokuthola omiyane.
Kuye indlela ukulungisa anezikhala libhekwa ku:
imikhiqizo Door makhulu ngosayizi. Ngo o uhle ezifana, kukhona okwengeziwe eqinisa izimbambo ezinikeza amandla ezithuthukisiwe.
Esishelelayo ezakhiwe, ukuhamba owenziwa ngomunye Umhlahlandlela nge ibhande iwindi.
imodeli Framework, efakwe kwi ifasitela ngosizo Z-fasteners.
Ngaphezu kwalokho, kukhona futhi kukho roll noma roller yokucina. Lokhu inetha elivimba omiyane lapho iphuma noma ivaliwe ibhokisi. Uma kudingeka, kungase spin bese uvala ku window.
Izinzuzo esemqoka izakhiwo ezinjalo
Njenganoma yimuphi omunye umkhiqizo, inetha lokuvikela omiyane amawindi plastic babe eziningi eziwusizo obungenakuphikwa. Omunye izinzuzo main angabhekwa intengo yeningi, sibonga ngalo ibisitholakala kunoma umthengi isilinganiso. Lo mklamo ikuvumela ukuvikela amakhaya abo kusuka izinambuzane, uthuli emgwaqweni, ngisho ewa izitezi ka izinqamu zikagwayi.
Kubalulekile futhi ukuthi khona umkhiqizo esinjalo asisho ukuthi akudingeki bonakalise jikelele ukubonakala iwindi plastic. abakhiqizi Modern ukukhiqiza onobuhle ngombala okuhlukile.
Indlela ukufaka inetha elivimba omiyane lapho ku iziqobosho plastic?
Kuyaphawuleka ukuthi le nqubo ilula ukuze ukwazi ukusingatha uwedwa ngaphandle kosizo ochwepheshe naye. Ukuze afeze ukufakwa, uzodinga ezine prisverlennyh pre ukuze uzimele obandayo kubakaki (amabili phezulu kanye phansi). Kufanele kuqashelwe ukuthi phansi net phansi isigamu isentimitha ngezansi ukuvulwa. lwemidlalo Upper kufanele zitholakale ngesikhathi ukuphakama kwensika eyodwa isentimitha kusukwa engenhla komkhiqizo. Mosquito net kulula ukufaka ku Slots futhi uwela phansi. Naphezu kalula okusobala le ndlela, namanje idinga ezinye okunamathiselwe umsebenzi.
Ukukhweza ngu Velcro
Design, misa ngendlela ebonakala ezingeni lelisetulu ngokuqina. Basuke ukubekezelela kahle umswakama high, kushintsha izinga lokushisa nokuchayeka elangeni. Inqubo ukuqaqa, balayisha zimane nokususa yokugcina. imikhiqizo enjalo kungaba hhayi kuphela wageza ngesandla ngensipho izipanji, kodwa futhi ukuze kugezelwe umshini.
Ngaphambi kokuqala indawo yokufaka, okuzoba inetha lokuvikela omiyane, kufanele kahle bahlanza of uthuli zanqwabelana futhi enenhlabathi khona. Khona-ke, azungezwe ewindini udinga unamathele isiqeshana of Yesigcilikisha tape ekhethekile, lapho lizonamathiselwa umkhiqizo. Kwamanzi embozwe Velcro izingwegwe sebuningini ukunamathela kwamanetha nokuqinisekisa ukuxhumana aqinile futhi Ubuningi bamahora ezihambisanayo.
Ukufakwa esebenzisa odonsa
Kufanele ngokushesha kuqashelwe ukuthi le ndlela izobiza ezibizayo kwalowo odlule. Kodwa izindleko kuqhathaniswa okusezingeni eliphezulu olungisiswayo enkulu design nokwethenjelwa. Njengoba kulezi zimo ezingenhla, kungase kwenziwe ngesandla. Okokuqala, kudingeka usike tape nokubopha enezinto ezimbili bese ufaka odonsa emaphaketheni ekhethekile. Uhlangothi ebanzi kumelwe ubhekane ingaphakathi kuvulwa. odonsa Small zitholakala ezansi enkulu - phezulu.
Ukuze aqinisekise igridi enikeziwe in the izinzipho ikhithi futhi iteyipu. Ukuze ulinamathisela metal noma plastic umnyango leaf, ungasebenzisa tape kabili emaceleni. Kulokhu, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi emkhatsini phansi kanye emaphethelweni phansi sihloko hhayi amamilimitha angu esingaphansi kwezinsuku ezimbili. Ukufihla zonke iziqobosho futhi wenze umklamo wokugcina igcwaliswe futhi ukubukeka yobuhle, kutuswa ukusebenzisa laths ekhethekile.
Izinzuzo esemqoka le ndlela ingathiwa ukufakwa lula futhi uhlale umuhle. Igridi odonsa zakhiwe ngezinto ukungcola-oxosha, ngakho-ke eside azigcina ukubukeka yokuqala. Ngaphezu kwalokho, kungenziwa kalula wageza umshini. Ngaphandle opholile ifakiwe, kukhona uzibuthe ezimbili ezengeziwe inamathelisiwe in phansi ukuvulwa.
Indlela ugcwalise igesi ukuxegiselwa kahle